कोभिड प्रभावित कृषकलाई चल्ला खरिदमा राहत «
कोभिड प्रभावित कृषकलाई चल्ला खरिदमा राहत
लमजुङ-कोरोना प्रभावित कुखुरा व्यवसायीहरुलाई राहात मिल्ने गरी चल्ला आयात गर्न सरकारले रकम विनियोजन गरे अनुरुप लमजुङका ७१ जना कृषक लाभान्वित हुने भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक कुखुरा पालन गर्दै आएका ७१ जना कृषक राहतका लागि छनौट भएका हुन् ।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै लकडाउनका कारण प्रभावित जिल्लाका कुखुरापालक कृषकहरुलाई ब्रोइलर र लेयर्स कुखुराको चल्लामा विशेष अनुदानका लागि २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले जनाएको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डा. रुपेश श्रेष्ठका अनुसार कोभिड प्रभावित कृषकहरुलाई राहात स्वरुप ७५ प्रतिशत अनुदानमा ३५ हजार कुखुराको चल्ला वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २० हजार बोइलर कुखुराको चल्ला र १५ हजार लेयर्स कुखुराको चल्ला वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर कार्यालयमा भने ३२ हजार ६ सय ५० कुखुराको चल्लाका लागि मात्रै निवेदन परेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार कृषकहरुको माग निवेदनका लागि तीन पटकसम्म सूचना जारी गरिएको थियो । पछिल्लो पटक प्रकाशित सूचना अनुसार फागुन ६ गतेसम्मका लागि माग निवेदन दिने समय सिमा तोकिएको थियो ।
“तीन पटक सम्म सूचना प्रकाशित ग¥यौं, तर पनि पर्याप्त कृषकको निवेदन आएन” डा. श्रेष्ठले भने, “जिल्लामा कुखुरा पालक कृषक अधिक भएपनि दर्ता नभएका कारण प्रकृयामा आउन समस्या भएको बुझ्यौं ।”
कार्यालयका अनुसार बोइलर कुखुरा चल्ला राहतका लागि ४४ जना कृषक छनौट भएका छन् भने लेयर्स कुखुराको चल्लाको निम्ति २७ जना कृषक छनौट भएका छन् । चल्ला राहातका लागि कृषकबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा कार्यविधि अनुसार चल्ला वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले छनौट भएका ७१ जना कृषक मध्ये एक जनालाई एक सय चल्ला, पाँच जनालाई दुई सय ५० चल्ला, आठ जनालाई तीन सय ५० र अन्य बाँकीलाई पाँच सयका दरले चल्ला राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषकहरुलाई कार्यालयले तोकेको मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराउने र कुखुराको चल्ला कृषक आफैंले खरिद गर्नुपर्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
चल्ला वितरणका लागि निर्धारित कार्यविधिअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष पहिलेदेखि सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई व्यावसायिक कुखुरा पालन गरेको हुनुपर्ने रहेको छ । जिल्लामा सञ्चलानमा रहेका अधिकांश कुखुरा व्यवसाय दर्ता विनानै सञ्चालनमा रहेकाले निवदेन कम परेको हुनसक्ने कार्यालयको अनुमान छ ।
कार्यालयले राहत चल्ला वितरणका लागि बोइलर प्रतिगोटा ८० र लेयर्स प्रतिगोटा एकसय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । जसमध्ये कार्यालयको तर्फबाट ७५ प्रतिशत अनुदान हुने हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक कुखुरापालन गर्दै आएका कृषकहरुको निम्ति कुखुरा चल्ला विशेष राहात प्याकेज ल्याएको हो । कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण कृषकहरु मारमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले यस्तो राहात प्याकेज ल्याएको हो ।
कोभिड प्रभावित कृषक